Maxaa ciidan gaar ah loo geeyay magaalada Baydhabo? – Bandhiga
Iyadoo shalay Magaalada Baydhabo dowladda ay gaysay ciidamo Boolis ah oo ka qayb qaata suggida amaanka Magaaladaasi, ayaa Maamulka Koonfur Galbeed waxa ay ka hadleen arrintaasi.
Wasiirka Amniga Maamulka Koonfur Galbeed Xasan Xuseen Maxamed ayaa sheegay ciidamadan inay door ka qaadanayaan sidii ay u xoojin lahaayeen ka hortaga in kooxaha Al-Shabaab ay weerar ka gaystaan magaalada inta lagu guda jiro arrimaha doorashada.
“Sax waaye wey jirtaa ciidamo boolis ah oo heer Federaal ah ayaa la keenay magaalada Baydhabo, ciidan boolis oo Federaal ah ma ahan markii ugu horeysay ee la keeno magaalada baydhabo horeyna wey u joogeen, Insha Allah kuwa kale oo badan waxaan rajeyneynaa in la keeno, Waad la socoto deegaanka waxaa ka jirta doorasho, doorashada waxa la rabaa inay ku dhacdo si nabad ah.” ayuu yiri Wasiirka Amniga ee Koonfur Galbeed.
Wasiirka ayaa sheegay in Argagixisada Al-Shabaab ay doonayaan inay falal amni darro ka geystaan deegaanada Koonfur galbeed, waxaana uu xusay in ciidankana ay ka shaqeyn doonaan amniga.
Ciidanka la keenay ayuu sheegay iney u yimaadeen sugidda amniga, dowladda Goboleedka Koonfur galbeed ee Soomaaliya waxaana ay ka mid tahay dowlad Goboleedyada xubnaha ka ah federaalka, wuxuuna hadalkiisa raaciyay “wax dhibaato ahna kuma qabno ciidamada naloo keenay oo ka shaqeynaya Nabad gelyada.”